दानब नदिमा चरम दोहोन ः जनप्रतिनिधि आएपछि दोहोन बढेको स्थानीयको आरोप::DainikPatra
ललित पाण्डेय / रुपन्देही । रुपन्देहीको दानब नदिमा चरम दोहन भएको छ । विकास निर्माणको नाममा नदिमाथि चरम दोहोन बढ्दै जाँदा कतिपय बस्ती नै जोखिममा परेका छन ।
रुपन्देही जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिकाको दानब नदि अन्र्तगत धनौंरा नाका क्षेत्रबाट चरम रुपमा नदिजन्य पदार्थको दोहोन भएको हो । चरम दोहोनले गर्दा नदि गहिरो हुँदै गएको छ ।
भारी यन्त्र ( जेसिबी ) लगाएर नदिमा दोहोन गर्दा ठाउँ ठाउँमा गहिरो खाडल बनेका छन । उत्खलनले गर्दा करिब ७ फिट भन्दा बढि नदि गहिरो भएको स्थानीयले बताए ।
स्थानीय जनप्रनिधि आएपछि नदिमा चरम दोहोन बढ्दै गएको स्थानीयको आरोप छ । दानब नदिको तल्लो क्षेत्र शुद्धोधन गाउँपालिका र गैडहवा गाउँपालिकाको सिमाना पर्ने दानव नदिमा ठेक्का खुलाउँदा चरम दोहोन भएको हो ।
शुद्धोधन गाउँपालिकाले ट्रड सप्लार्य कम्पन्नीलाई २ करोड ५४ लाख २५ हजारमा ठेक्का दिएको थियो । बैशाख १५ गतदेखि जेठ मसान्तसम्म ९ लाख ८९ हजार घनफिट उत्खलनको लागि अनुमती पाएको हो ।
गाउँपालिकाले समयमा नै अनुगमन नगर्दा नदिमा चरम रुपमा ठेकेदारले दोहोन गरेका छन । ठेक्का दिने अधिकार र अनुगमनको अधिकार पाएको स्थानीय तहको कमजोरीका कारण नदिमा दोहन बढेको स्थानीयको भनाई छ ।
दानब नदिले वर्षायाममा उर्लिएर आउँदा यस क्षेत्रमा सयौं विगाहा खेती योग्य जमिन वालुवामा परिणत भएका छन ।
वर्षायाममा नदिले धार परिवर्तन गरेर बग्दा यँहाको धनरउवा बस्ती नै जोखिममा परेको स्थानीय रामकेश बेलदारले बताए ।
दानव नदिले आफ्नो १ विगाहा जमिन कटान गरेको लालपुर्जा देखाउँदै उनले भने जनप्रतिनिधि आएपछि नदिमा दोहोन बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा गाउँमा जोखिम पु¥याएको छ । खेती योग्य जमिन बालुवामा परिणत भएका छन ।
नदिले वर्षेनी धार परिर्वतन गरेर बग्दछ उनले भने यसपाली नदिमा जथाभावि उत्खलन भएको छ , यँसले गर्दा वर्षायाममा नदिले खेती योग्य जमिन कटान गर्न सक्ने उनले बताए ।
शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं. ६ बस्ने हरिराम पालले लालपुर्जा जग्गाबाट नदिजन्य पदार्थ उत्खलन भएको भनि जिल्ला समन्वयन समितिलाई निवेदन दिएको बताए ।
जिससबाट उत्खलन रोक्नको लागि पत्र आएपनि दिन र राती समेत भारी यन्त्र प्रयोग गरी दोहोन गरिएको उनले बताए ।
ठेकेदारले मनपरी भारीयन्त्र चलाउँदा यहिले धनौंरा नाकामा मान्छे डुवान भन्दा गहिरो गाडल बनेको छ । जिल्ला समन्वय समिति अन्र्तगत जिल्ला स्तरिय अनुमग तथा ब्यवस्थापन सदस्य ईन्जिनियर हरि पौडेलका अनुसार धनौंरा नाकामा आई.ई.ई.मापदण्डलाई ख्याल नगरी चरम रुपमा दोहोन भएको बताए ।
उनले भने पानीको सतह भन्दा माथि उत्खलन गर्नु पर्ने थियो यँहा त मान्छे नै डुवानी गहिरो गाडन बनेको छ । जँहा मान्छ नै पौडी खेलेका छन ।
चरम लापरबाही तरिकारले नदिमा उत्खलन भएको छ ईन्जिनियर पौडेलले भने अनुगमनको लागि स्थानीयतहमा अनुगमन समिति बनेको छ , वडाले पनि ख्याल गर्नु पर्ने हो तर यँहा लापरबाही भएको छ ।
नदिजन्य पदार्थको घाटगदी पनि नदिबाट नजिकै गरिएको छ जुन पापदण्ड भन्दा बिपरीत भएको पौडेलले बताए । ठेकेदारलाई कार्यबाही गर्नु पर्ने उनले बताए ।
सुद्धोधन गाउँपालिका वडा नंं. ६ का वडाअध्यक्ष जयशङ्कर पाठकले यस क्षेत्र जोखमपूर्ण रहेकोले गाउँपालिकालाई भारीयन्त्र प्रयोग गरी ठेक्का नदिन आग्रह गरेपनि गाउँपालिकाले ठेक्का दिएको बताए ।
यस क्षेत्रमा कटानको उच्च सम्भावना भएकाले नदिमा भारीयन्त्रको प्रयोग भन्दा मानिस लगाएर बेल्चाले उत्खलन गर्नु पर्ने गाउँपालिकामा आफुले बताए पनि गाउँपालिकाले टेण्डर गरेर ठेकेदारले भारी यन्त्र प्रयोग गरी चरम उत्खलन गरेको उनले स्विकार गरे ।
सुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष किशुन चौधरीले भने गैडहवा गाउँपालिका तिरको ठेकेदारले चरम रुपमा दोहोन गरेको आरोप लगाए ।
४ वटा भारीयन्त्रले उत्खलन गर्दै थिए अनुगमनमा पुग्दा उनले भने ३ वटा गैडहवा गाउँपालिकाको ठेकेदारको थियो १ वटा हाम्रो थियो उनले भने । अहिले उत्खलनमा रोक लगाएको चौधरीले बताए ।